Sijoyine: Impendulo ye-COVID-19 yaseAfrika -AfriArXiv
Sijoyine: COVID-19 Impendulo yeAfrika
E papashwe ngu I-AfricArXiv kunye namaqabane on 16I Epreli 2020 16I Epreli 2020
Amalungu eqela avela I-AfricArXiv babambisene kwaye basebenzisana ngokusondeleyo neminye imibutho efana Ikhowudi ye-Afrika, I-Vilsquare, Inethiwekhi ye-Afrika yoLwazi lokuFunda noLwazi, I-TCC yase-Afrika, yaye Isayensi 4 iAfrika phakathi kwezinye izinto zokuhlanganisa intshukumo evela kwindawo yesayensi kunye ne-Afrika.
Nceda usijoyine kwezi zixhobo zedijithali zilandelayo nakwindlela zonxibelelwano:
Islayidi, igumbi lethu lengxoxo kunye neforamu yoluntu: (Joyina ngesixhobo sokumema)
I-Trello, idashboard yethu, kuwo wonke umsebenzi, imisebenzi
IBhodi yokuphendula ye-COVID-19 yase-Afrika (Joyina ngesixhobo sokumema)
IBhodi yabahlali ye-KiaArXiv yemisebenzi ethile (Joyina apha)
Kwiwebhusayithi ye -AfricaArXiv, ufumana ezinye iziteshi zoluntu onokuthi uzijoyine: africarxiv.org/contact/
Nazi iindawo ezimbalwa zokuqala zokufumana indlela oza kusebenza ngayo:
Joyina amaqonga aphezulu kwaye uqinisekise i-imeyile
Emva kokuba ungene kwi-Trello, ungazinikezela okanye ukongezwa kwiibhodi kunye namakhadi ahambelana nemisebenzi oyikhethileyo ngexesha lokubhalisa.
Zive ukhululekile ukukhangela iibhodi kunye namakhadi kwi-Trello ukuze ujoyine iibhodi kunye namakhadi owathandayo. (Ungajoyina ngaphezulu kwebhodi enye okanye ikhadi)
Joyina incoko kwi-Slack / AfricArXiv ukuze wabelane ngeengcinga, ngezixhobo, ze-Q & A kunye nokuxoxa nokucwangcisa kwangaphambili. Uyakufumana itshaneli ebizwa ngokuba yi # covid19-africa -mpendulo yengxoxo enzulu, kwaye unganako ukujoyina ezinye iziteshi zethu zeSlack.
Ukuba umtsha ku-Slack ungafunda ukuba ungayisebenzisa njani apha: youtube.com/watch?v=9RJZMSsH7-g
Ukuba umtsha kuTrello ungafunda ukuyisebenzisa apha: youtu.be/xky48zyL9iA
Ngaphandle kwengxoxo kwi-Slack kunye neTrello, siya kuba neefowuni zabahlali zeveki nganye ezicwangcisiweyo zokunxibelelana kunye kunye nokuvavanya imisebenzi kunye namaqhinga. Igumbi lethu leJit.si liku meet.jit.si/AfricArXiv (ukuba oku kuyasilela singaya naseZoom).
Umnxeba wokuqala wabahlali uya kuba ngomso (ngoLwesihlanu) nge-4 pm SAST / CAT = 5 pm EATBuza nje ukuba unemibuzo kwaye nceda ukongeza imibono yakho, iinkxalabo kunye neengcebiso.
iindidi:	UkusebenzisanaCovid-19Unxibelelwano lwezobuNzululwazi
Ukunciphisa iimpembelelo zeCOVID-19 ngokusasaza izicoci zesandla
Inyathelo lokuqokelela oonjingalwazi beYunivesithi yase-Omdurman Islamic eSudan yokuthomalalisa ubhubhane we-COVID-19.